ओली र प्रचण्डको निर्णय ! इश्वर, रघुविर र बर्षमान माथि कस्तो होला कार्वाही……? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
ओली र प्रचण्डको निर्णय ! इश्वर, रघुविर र बर्षमान माथि कस्तो होला कार्वाही……?
महानिर्देशक भट्टराईले सुरुमा मन्त्री महासेठसमक्ष सिन्डिकेट तोड्ने प्रस्ताव लगेका थिए । उनले खासै वास्ता नगरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई यो योजना सुनाए । बादलले सहयोग गर्ने बचन दिएपछि सिन्डिकेट विरुद्धको अभियान सफल भयो, तर यो सफलतासँगै नयाँ बसपार्क ठेक्का लिएको ल्होत्से कम्पनीको सिन्डिकेट पनि तोडियो । उक्त कम्पनीले नयाँ बसपार्कबाट अपारदर्शी भाडा उठाउन नपाउने भएपछि मन्त्री महासेठ महानिर्देशक भट्टराईविरुद्ध खनिएका हुन् ।
विगतमा श्रम विभागको महानिर्देशक सरुवा गर्दा श्रममन्त्री सरिता गिरीको जागिर गए जस्तै यतिबेला यातायात विभागका महानिर्देशको सरुवा गरेकै कारण महासेठको जागिर जान लागेको हो । त्यसैगरी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि जागिर जान लागेको छ ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई त नेपाली सेनाले नै हटाउन दबाब दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आफ्नो हुर्मत लिइएका कारण नेपाली सेना रक्षामन्त्री पोखरेलसँग निकै आक्रोशित बनेको हो । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत पोखरेलको सम्बन्ध राम्रो छैन ।।